“Revy Lôlô sy ny tariny”, etsy amin’ny Piment Café
Mandra-piandry ilay fotoana manaraka efa nampanantenain’i Lôlô nandritra ny fandalovany farany teto, anjaran’ireo mpikambana monina eto an-tanindrazana aloha no mamelombelona ny “Revy Lôlô sy ny tariny”. Fantatra fa hiverina etsy amin’ny Piment Café Behoririka indray i Benny, Bebey ary Sammy, anio manomboka amin’ny 9 ora alina. Hanampy an’ireto mpikambana ao amin’ny Lôlô sy ny tariny ireto amin’ny fitendrena i Sefo Nônôh, izay efa niaraka ela tamin’izy ireo ihany.
Eny amin’ny Jao’s Pub ny Rotsaka
Eto Antananarivo, ary manome fotoana ireo mpankafy azy i Din sy ny tarika Rotsaka izay tarihiny anio, manomboka amin’ny 9 ora alina. Mafana tsy an-kiato, toy ny efa nahafantarana ny tarika hatramin’izay ihany no homanin-dry Din amin’io. Hitondrany indray ireo hira nampalaza ny salegy haingam-pandeha, nampiavaka an’i Din Rotsaka hatramin’izao izany. Fotoana ihany koa hanehoany ireo hira faramparany, izay entina hanamarihana ny fitetezam-paritra amin’ity taona ity.
Farah Johns sy ny “Kopi Kolé”-ny, etsy amin’ny Le Glacier
Malaza indray tato ho ato ity fiarahana an-tsehatra hataon’ny mpanakanto sy ny “KopiKolé” ity. Fantatra mantsy fa hifampizara sehatra amin’ilay “KopiKolé”-ny Farah Johns anio alina. Hafana kokoa ny fotoana noho izany, satria samy hampiseho ny talentany i Hoully sy Farah Johns. “Double ambiance” rahateo ny lohatenin’ny fiarahana, izay mahafehy tsar any mety hiseho ao. Rehefa tafaraka an-tsehatra toy izao vao tena hita mivantana ny mampitovy na ny maha samy hafa azy ireo.
Tovo J’Hay, eny amin’ny Trass Tsiadana
Taorian’ny hetsika roa nanamarihana ny fanaovam-belona ny taona nivalona sy nandraisana ny taom-baovao, manome fotoana ireo mpankafy azy indray i Tovo J’Hay. Ho eny amin’ny Trass Tsiadana indray izy anio alina, ho an’ireo tsy afaka tamin’ny seho farany. Mbola ao anatin’ny fampahafantarana ny rakikirany farany, “Angolanao”, rahateo ity mpanakanto ity amin’izao fotoana izao.
Hasehon’i Hil Chaffre, anio, ny “Vadiko tiako”
Araka ny efa nampahafantarina mialoha, nampanao fifaninanana ho an’ireo mpanatontosa rakitsary ilay mpanakanto reonioney, Hil Chaffre. Ho an’ilay hirany “Vadiko tiako” io, ka ho fantatra anio izay mpanatontosa nahazo ny laharana voalohany, etsy amin’ny K’Art Antanimena. Aorian’izay, hanolotra ilay hira voalohany ho an’ireo mpanao gazety sy izay nasaina manokana mandritra io fotoana io i Hil Chaffre sy ireo mpanakanto malagasy miara-milalao mozika aminy.